Kubernetes inoenda kushanduro 1.20, iyo inoratidza kusvika kune beta vhezheni yeKubectl Debug | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Kubernetes timu yekusimudzira yakavhurwa ichangoburitswa iyo itsva vhezheni 1.20, vhezheni inoenderera nebasa rekuchenesa iro rakatanga neshanduro 1.19 uye inosuma anopfuura makumi mana maficha, kusanganisira gumi nematanhatu akagadziridzwa mabasa uye 11 ayo anozopedzisira asarudzwa seakagadzikana.
Chikwata chakanyatsoteerera kuenderera mberi kwekuvandudza kwemabasa akakosha senge cron mabasa uye Kubelet's CRI rutsigiro, vanga vari muchikamu cheAlpha kwenguva yakareba. Zvimiro izvo zvisinga ratidze kuenderera mberi mukugadzikana zvinodzikiswa nekukurumidza mune ramangwana.
Kubernetes 1.20 yakakwira
Imwe yeshanduko huru muKubernetes 1.20 ndiko kuderedzwa kweDocker, sezvo zvataurwa mu changelog, yekutanga beta vhezheni yeKubernetes 1.20 yakazivisa kuti iyo Tsigiro yeDocker inoshanda kune yakadzora Kubelet uye inofanirwa kusiiwa zvachose mune imwe yeshanduro dzinotevera.
Mukuona kwechikwata chekusimudzira, Mudziyo Runtime inowanikwa inowanikwa (CRI) se plug-in interface ye Kubelet ikozvino yasvika padanho rinodiwa rekukura kukwanisa kuchinjira kuCRI inoenderana nemidziyo yenguva yekumhanyisa nguva iyo inogona kushandiswa pasina kudzoreredza.
Neiyi Kubectl Debug inoenda kubetaNayo, vashandisi vanogona kuongorora inomhanya Pod vasina kuitangisa. Pamusoro pezvo, vashandisi havachafanirwe kupinda mumudziyo kuti vaongorore masisitimu kana kutanga mashandiro senge ekugadzirisa zvinoshandiswa kana kutanga kukumbira kweneti kubva kuzita renzvimbo yepodhi Uku kusimudzira kunobvisa kutsamira paSSH yekuchengetedza uye kugadzirisa node.
Ichi chiitiko chinotsigira zvakajairika kugadzirisa debug workflows zvakananga kubva kubectl. Zviitiko zvekutambudza zvinotsigirwa muiyi vhezheni yebectl:
Gadzirisa nyaya nemitoro yebasa inopunzika pakutanga nekugadzira kopi yepodhi iyo inoshandisa imwe mudziyo mudziyo kana kuraira.
Gadzirisa matambudziko emidziyo pasina kutsauswa nekuwedzera chigadziko chitsva nemidziyo yekugadzirisa, kungave mune itsva pod kopi kana kushandisa ephemeral mudziyo.
Troubleshoot a node nekugadzira mudziyo unomhanya munzvimbo dzemubati wemazita uye nekuwana iyo yeWadhi faira system.
Imwe shanduko huru yeiyi vhezheni itsva, ndiwo mas yakagadzikana vhoriyamu snapshot mashandiro. Ichi chimiro chinopa yakajairwa nzira kugonesa mumvuri vhoriyamu mashandiro uye inobvumira vashandisi kuisa mumvuri kuteedzera mashandiro pane inotakurika hwaro mune chero inotsigirwa Kubernetes nharaunda uye ekuchengetedza vanopa.
Pamusoro pezvo, aya maKubernetes snapshot primitives anoita sekutanga ekuvakisa mabhaisikopo ekuvandudza epamberi bhizinesi-nhanho yekuchengetedza manejimendi mashandiro eKubernetes, kusanganisira masumbu kana ekushandisa-chikamu chekuchengetedza mhinduro.
Pane rimwe divi, Maitiro PID kukamurwa kwekugadzikana kunoratidzwa, sezvo maID ID ari akakosha zviwanikwa paLinux mauto. Hazvina basa kuti usvike muganho webasa usati wasvika kune chero imwe ganhuriro yezvekushandisa uye zvichikonzera kusagadzikana pamushini wekutambira
Vatariri vanoda nzira dzekuona kuti vashandisi pods havagone kunetesa kupera kunodzivirira madhimoni ekumhanyisa kumhanya.
Zvakare, zvakakosha kuti uone kuti mapidhi akaganhurirwa pakati pemapodhi kuti ave nechokwadi chekuti ane pashoma pesvedzero pane mamwe mabasa enzvimbo pane iyo node. Mushure mekugoneswa nekutadza kwegore rimwe, iyo GIS node inoshandura iyo PID miganho kuenda kuGA mu SupportNodePidsLimit uye SupportPodPidsLimit.
Zvakare muKubernetes 1.20 IPv4 / IPv6 huviri stack yakatumiswazve kutsigira maviri-stack mabasa zvinoenderana nemushandisi uye nharaunda mhinduro. Izvi zvinobvumidza iyo IP kero yeiyo IPv4 uye IPv6 sevhisi sosi kuti igoverwe kune imwechete sevhisi, uye zvakare inobvumidza sevhisi kusimuka kubva kune imwechete IP stack kuenda kune mbiri IP stack uye zvinopesana.
Pakupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi vhezheni nyowani, unogona kutarisa izvo zvinyorwa mu chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kubernetes inoenda kushanduro 1.20, zvichiratidza kusvika kweKubectl Debug mu beta.